१२८.४६ प्रतिशतले बीमा शुल्क आर्जन वृद्धि गरेको रिलायन्स लाइफको अन्य सूचक कस्ता ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बीमा > १२८.४६ प्रतिशतले बीमा शुल्क आर्जन वृद्धि गरेको रिलायन्स लाइफको अन्य सूचक कस्ता ?
१२८.४६ प्रतिशतले बीमा शुल्क आर्जन वृद्धि गरेको रिलायन्स लाइफको अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल)को नाफामा सामान्य सुधार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासम्ममा कम्पनीले ६ करोड ५८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले मात्र बढी हो । गत वर्ष कम्पनीले ६ रकोड १३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । सोमबार कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
यस आवमा कुल ४ अर्ब ९० करोड ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले गत वर्ष ८३ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । गत वर्षको तुलनमा यस वर्ष कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन १२८.४६ प्रतिशतले बढी हो ।
यस आवमा कुल जारी बीमालेखको संख्या १२ हजार १२० रहेको कम्पनीको कुल दावी भुक्तानी रकम २३ करोड ६४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस वर्ष कुल दावी भुक्तानी संख्या १४२ छ ।
तेस्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा कोषमा २० करोड ५७ लाख १४ रुपैयाँ, जीवन बीमा कोषमा २ अर्ब २६ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र महाबिपत्ती कोष जगेडामा २ करोड २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४ रुपैयाँ १८ पैसा, प्रतिसेयर नेटवर्थ ११० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ ।
२०७८ वैशाख २० गते १२:४४ मा प्रकाशित
विशिष्टिकृत लगानी कोषको संचालन गर्न छानिए ५ कम्पनी, पूर्वाधार तयार गर्न सेबोनको निर्देशन
आन्दोलनमा सहभागी भए देश निकाला सहित ५० हजार जरिवाना हुने
कहिले नियुक्ति होलान् डेपुटी गभर्नर ?
शेयर बजारमा ९ अंकको सुधार, किन घट्यो कारोबार ?
नेपाल टेलिकमले निशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्ने